Google Docs Inotsanangurwa | Martech Zone
Google Docs Inotsanangurwa
Chitatu, Ndira 9, 2008 Chipiri, January 6, 2015 Douglas Karr
Google Docs yakanyatso kuve chikomborero kukambani yandinoshandira. Isu tiri kambani mudiki yevashanu (takangobhadhara chedu cheshanu!) Uye isu hatina sevha kana yakagovaniswa netiweki mudziyo. Kutaura chokwadi, hatidi imwe.
Pandakatanga, zvinyorwa zvese zvakangopfuudzwa kuburikidza neemail uye nekukurumidza zvakavhiringidza! Ndakaridza pfuti Google Docs ndokutanga kusevha magwaro… ipapo isu moved to Google Apps uye isu zvino tinochengetedza zvese zvinyorwa zvedu zvakagovaniswa mairi. Tine nhengo dzechikwata muDallas, San Jose, uye muIndia dzinoshanda kubva Basecamp uye izvi zvinyorwa zuva nezuva uye zvave zvakanakisa!
Kubva pakuona kwekushambadzira, ndinofunga Google Docs ingave iri sosi yakanaka kune vanyori uye vapepeti kuti vashandise pakuvaka zvemukati mutengi. Sezvo vese vari vaviri vanogona kupinda panguva imwe chete, gadzira, taura, nezvimwe… zvinoita kunge chishandiso chakakwana.
Ndakaona Common Craft yakagovana imwe vhidhiyo maererano neGoogle maHTML
Kana iwe usati wanyoresa, zvakakosha! Kune emabhizimusi madiki ane vashoma vevashandi kana vashandi vasina nzvimbo yepakati, igadziriro huru.
Yedu Kwose Gwaro uye Maitiro Strani
Basecamp ndeye rudimentary projekiti yekuchengetera patinotaurirana uye tinotora kufambira mberi kweprojekti. Google maHTML anonyanya kubatana uye anochengetedza inoshamisa shanduko nhoroondo, saka tinoishandisa kwete Basecamp.
Pakati pezviviri, isu tichiri kuda basa manejimendi sisitimu, saka yedu kusangana uye kusimudzira yakasimba ini ndiri kuongorora Atlassian Jira. Inoita senge huru sisitimu, ini ndinoteedzera uye ndokuzivisa iwe kuti zvinoshanda sei!
Tags: Brand Kuongororacheki rondedzeroMarTech Blog Radio Ratidzachepamusoro chinzvimbokubhadhara pakukandappcppc kushambadziraSlidermagariro enhau analyticsvhidhiyo nhare
Ndiyo yekupedzisira 10 Peresenti
Chikamu Chikamu Kuongorora Kwemagariro, Chikamu Chehunyanzvi Therapy
Ndira 9, 2008 na7: 26 PM
Yakakura posvo, Doug. Ini ndanga ndichitaura neimwe yeshamwari dzangu rimwe zuva, mukomana anomhanya diki dhizaini dhizaini. Anoshanda nemunyori mamaira zana nemakumi mashanu, uye dzimwe nguva anoshanda pamwe nevanhu vari kure seDenver. Vanozviita sei kuti zvishande? Google Docs neGoogle Apps. Kusununguka kutaura REM, aya anogona kunge ari magumo esoftware sekuzviziva kwedu, uye ini kune mumwe ndaizonzwa zvakanaka.
Ndira 10, 2008 na10: 19 PM
Ini ndinobvumirana zvachose, asi ini ndinoenda kumberi ndoti zvinoshanda chaizvo kumakambani epakati uye kunyange makuru.
Ndakagara ndichifunga MS Office se "yakakosha" kunyorera, asi mumwe wandaishanda naye akaedza kundikurudzira kuti iwe unogona kuita pasina Hofisi uchishandisa Google Docs uye mahara Office vanoona (semuenzaniso Excel Viewer). Nharo yake yaive yekuti pakuverenga magwaro iwe unoshandisa vanoiona (kutarisa zviri nyore kubva pakapetwa-kaviri), asi kugadzira magwaro matsva iwe unoshandisa Google Docs. Ndakanga ndisina chokwadi nekuti ini ndiri mushandisi mukuru weExel, asi kubva ipapo ndatenga komputa nyowani (Vista, yikes!) Uye ndakafunga kuti ndaizoyedza. Zvakatora kujairira, asi ikozvino ndave nechokwadi kuti ari kutaura chokwadi nekuti ndakakwanisa "kurarama" kweinenge mwedzi pasina kana nyaya.
Rakanakisa-divi mhedzisiro yaive yekuti ini ndaona kuti mangani magwaro anonyatsoitirwa kugoverwa. Iye zvino ndiri padanho rekuti ndinogumbuka chaizvo kana vanhu vatumira mahwendefa eExcel kutenderedza nekuda kwekubatana kuburikidza neemail. Izvo hazvina zvibereko nekuti hauzomboziva kuti ndeipi yazvino vhezheni. Mumwe anogona kupokana kuti Sharepoint server inogadzirisa matambudziko iwayo, asi hazviite kana uine vashandisi vekunze / vasina kubatana vasingakwanise kubatana kune yako Serverpoint server.
Shanduko iyi yakaoma kwazvo kune vashandisi munzvimbo yemubatanidzwa, nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, asi zvakadaro ini ndinoona vashoma uye vashandisi vekambani vachishandisa maWebhu based apps.
Sezvo iwe uchidudzira izvi, "Ndiwo magumo esoftware sekuzviziva kwedu, uye ini .." 🙂
Jan 14, 2008 pa 4: 24 AM
Isu tinomhanya nekambani diki yehukuru hwakaenzana uye iyo Zoho yekupa inotikwanira isu zvakanaka http://writer.zoho.com kuve wepedyo kune MSWORD chimiro chakangwara.
Jan 17, 2008 pa 4: 04 AM
Ini ndinoda Google Docs futi, asi ini handidi Basecamp. Ndinosarudza Wrike. Iwo maturusi ari nyore kwazvo, sezvo iwe uchigona kubatana nevanhu vazhinji sezvaunoda uye vese vanozowana mahara maakaundi.
Kukadzi 23, 2009 na11: 55 PM
Ndiri kutsvagisa mashandisiro eSMBs maGoogle apps uye ndeapi mapengo. Ndokumbirawo kuti unyore nezve ruzivo rwako nekubatanidza JIRA.